တရုတ်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေသည် တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူ ပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ထျန်းကျန်းမြို့၌ မြို့နေပြည်သူတစ်ဦးထံမှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ ရယူနေသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၌ မကြာသေးမီက COVID-19 ရောဂါပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် တည်ငြိမ်သွားပြီ ဖြစ်ကာ နိုင်ငံ၏ ဒေသအချို့တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်က ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ယခုအခါ အဓိကအားဖြင့် ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်လာသည့် ကူးစက်မှုများနှင့် လာမည့် အားလပ်ရက်အခါသမယတွင် ပြည်တွင်းခရီးသွားများ ကြိတ်ကြိတ်တိုးသွားလာမှု စသည့်စိန်ခေါ်မှုများဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရကြောင်း ကော်မရှင် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် He Qinghua က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်ပြည်မကြီး၌ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် COVID-19 ရောဂါ ပြည်တွင်းရောဂါကူးစက်မှုအသစ် ၁၀၄ ခုအား စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဟဲနန်ပြည်နယ်၌ ၅၂ ခု ၊ ထျန်းကျင်းမြို့၌ ၃၉ ခု ၊ ကွမ်တုန်းပြည်နယ်၌ ၈ ခု ၊ ဆန်းရှီးပြည်နယ်၌ ၄ ခု နှင့် ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်၌ ၁ ခု တို့ ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်အချက်အလက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထျန်းကျန်းမြို့၌ COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအများစုမှာ ပြီးခဲ့သည့်သုံးရက်အတွင်း quarantine ထားရှိသူများတွင် တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယင်းမှာ မြို့အတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံမှု ဖြစ်နိုင်ခြေသည် ကျဆင်းနေသည်ကို ညွှန်ပြနေကြောင်း He Qinghua က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါတာဝန်ရှိသူက quarantine နေရာများအား စီမံကိုင်တွယ်ရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု အဓိကပြောကြားခဲ့ပြီး COVID-19 ရောဂါတုန့်ပြန်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ အေဂျင်စီအချင်းချင်းအကြား ပူးပေါင်းအဖွဲ့ က ထျန်းကျန်းမြို့၌ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများအား လမ်းညွှန်ရန် အလုပ်အဖွဲ့တစ်ခု စေလွှတ်ထားကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆန်းရှီးပြည်နယ်၏ မြို့တော် Xi’an မြို့၌ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုသည် အခြေခံအားဖြင့် လျော့ကျသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဟဲနန်ပြည်နယ်သည် အစုအဖွဲ့ကူးစက်မှုများ၏ အန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း He Qinghua က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
COVID-19 situation in China stable, controllable: official
BEIJING, Jan. 15 (Xinhua) — The recent COVID-19 resurgence in China has been in general stabilized, as the country managed to bring the outbreaks in some areas under control inatimely manner, the National Health Commission said Saturday.
China is now facing challenges mainly from imported cases andadomestic travel rush in the upcoming holiday season, said He Qinghua, an official with the commission, atapress conference.
The Chinese mainland on Friday reported 104 new locally transmitted COVID-19 cases: 52 in Henan, 39 in Tianjin, eight in Guangdong, four in Shaanxi, and one in Zhejiang, official data shows.
Most of the COVID-19 cases in Tianjin in the past three days were found among people under quarantine, indicating that the possibility of virus spread in the city is declining, said He.
The official highlighted continuous efforts to manage quarantine spots, adding that the State Council inter-agency task force for COVID-19 response had sentaworking group to guide anti-epidemic work in Tianjin.
He added that the outbreak in Xi’an, capital of Shaanxi Province, has basically subsided, while Henan is still facing risks of community infections. ■
Photo – A medical worker takesaswab sample fromacitizen for nucleic acid test ataCOVID-19 testing site in north China’s Tianjin, Jan. 15, 2022. North China’s Tianjin Municipality launched the third round of citywide nucleic acid testing at7a.m. Saturday. (Xinhua/Sun Fanyue)